Ny Guangdong Giant Fluorine Energy Saving Technology Co., Ltd dia ao amin'ny tanànan'i Dongguang dia orinasa simika fikarohana ary fampandrosoana, famokarana, ireo olon'ny famolavolana akora-sary, ary ny tetika teknika dia iray amin'ireo orinasa mahomby.
Eo amin'ny sehatry ny akora simika sy nanomateriale dia nampiditra ny orinasan'ny orinasa tokana fanta-daza any an-trano sy any ivelany. Izy io dia afaka manome ny famatsiana fitaovana voalohany amin'ny kilasy sy fanohanana ara-teknika amin'ny fitsaboana any ivelany. Ny orinasa dia nanolo-tena ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny famokarana fluorocarbon , famindrana hafanana fluorocarbon , famokarana ary famarotana ny nanoscale telo manohitra fluoridinina ary manitatra ny sehatry ny fampiharana amin'ny orinasa avo lenta; Fantsona famindrana hafanana fluorocarbon dia ampiasaina betsaka amin'ny angovo vaovao , saha ara-toekarena vaovao ary ny fitrandrahana hafanana an'ny indostrian'ny tafika, izay nahatratra ny fihavoana angovo mahery vaika ary ny fihenan'ny fampihenana. Indrindra ny andian-dahatsoratra TUW-HYM-47 momba ny famindrana hafanana, fanodinana famoahana enti-mandrobona dia ampiharina amin'ny mpizara ivotoerana data, tsy mila filokana sy efitrano fampangatsiahana, mampihena ny fanjifana herinaratra, latsaky ny 1.1 PUE. Raha oharina amin'ny mari-pana nentin-drazana dia afaka mamonjy angovo mihoatra ny 85% izy. Ity andiana vokatra ity dia hampiharina betsaka amin'ny fihenan'ny hatsiaka sy ny hafanana amin'ny hafainganam-pandeha herinaratra haingam-pandeha hafainganam-pandeha, ny fiara mandeha amin'ny bateria lithium, ny turbine rivotra, ny angovo nokleary, ny milina fitrandrahana, ny famokarana herinaratra UHV ary ny rafitra radar miaramila.
Miaraka amin'ny fampandrosoana ny orinasa, nanangana ekipa matihanina sy mahay ary avo lenta ny orinasa, manaraka ny foto-kevitra momba ny "famoronana sanda ho an'ny mpanjifa", miaraka amin'ny haitao maoderina sy serivisy serivisy hampitombo hatrany ny fifaninanana lehibe amin'ny orinasa, mba hamoronana. toe-javatra fandresena miaraka amin'ny mpanjifa, manome vokatra sy serivisy mifaninana amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fantsom-baovao sy ny fomba fivoaran'ny tsena tokana.
Business Type : Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company , Agent
Products / Service : Fandroana Fluorocarbon , Vokatry ny fluorida , Hydrofluoroether , Ranomainty mpanonta UV , AF-coating , Vahaolana fanoratana amin'ny fanoratana-tanana
Capital ($ US $) : 1000000
Taona niorina : 2013
taratasy fanamarinana : MSDS
Company Address : Room 401 Building 2 No. 51 Bihu Dadao Fenggang Zhen Dongguan City GUangdong, Shenzhen, Guangdong, China
Bienvenue durable (tapitrisa US $) : US$2.5 Million - US$5 Million
Volavolam-pividianana fanao isan-taona (Million US $) : Below US$1 Million
Tahiry fanondrotana : 71% - 80%
Import & Export Mode: Fanafarana avy amin'ny masoivoho
Ny famokarana :3
Tsia ny mpiasan'ny QC :Fewer than 5 People
Factory Size (Sq.meters) :Below 1,000 square meters
Factory Location :Dongguan
Fandroana Fluorocarbon Vokatry ny fluorida Hydrofluoroether Ranomainty mpanonta UV AF-coating Vahaolana fanoratana amin'ny fanoratana-tanana Fridge Fluorocarbon Ranoka perfluorocarbon